मलेशियामा बाधिएको मन | शहरबाट शब्दहरु
« के कारण घोषणा गरिँदै छ नेवाः स्वायत्त राज्य ?
हराएकी सबिनाको खोजी, अब ईन्टरपोललाई जिम्मा »
मलेशियामा बाधिएको मन
मन नै हो स्वतन्त्र जतापनि बरालिन सक्छ । मनले आफ्नै अनुमति बगैर पनि उड्न सक्छ डुल्नसक्छ र खुल्नसक्छ । मनकै कुरा न हो मनले चाहेको पाए कति खुशी हुँदो हो । नपाए संसारकै दुखी पनि बन्दो हो । आज शहरबाट शब्दहरुमा मनहरुका अनेकन कुरा पस्किन खोजेको छु । जीवनका अनेक रंगहरु फेरिने एउटा यात्राको मोडमा भेट्टिएका अनेकन पात्रहरुका किस्साहरु ।
पैसा कमाउन र देशमा अर्थतन्त्र सुधार गराउन पौरखी नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भईरहेका छन् । उनीहरु विदेशमा कमाउँछन् रमाउँछन् र खुशी साट्छन् । पैसा कमाउन गएका नेपाली कसरी र किन रितो हात फर्किन्थे र विदेशी सुन्दरीका रंगीन रातका सुमधुर सपना बोकेर विदेशी ताजा हावामा बहकिएर बनाएका सपनाहरु लिलाम हुन्छ ।अनि उही पुरानै घरको ढोकामा उभिन आईपुग्छ … ।
फरक शैलीका अनुहार र व्यवहारहरु कति बिर्सिएका छन् कति भने भुल्न सकिएका छैनन् । तर प्रसंगका डोरीहरु जतातिरबाट बाँध्ने कोशिश गरिरहँदा पनि आजको शीर्षकमा मलेशियाले अग्रता पाएको छ । तापनि शब्दहरुका घेरालाई पहिला लण्डनबाट घुमाउन चाहन्छु । हिजोआज विद्यार्थीहरुका जमात शिक्षा मन्त्रालयमा बढेको छ कारण उही हो । विदेश उड्ने नशा र त्यसमा जोडिएको उच्च अध्ययन । परिवारवर्ग हर्षित छन् नै ’cause छोराछोरी अब विदेश उड्ने भयो । यस्तै खुशी दिलाएर विदेशमा पढ्न उडेकाहरुका दुखका कथाहरुमा खुशी बनेका परिवारले हेर्न र पढ्न पाएका हुँदैनन् । जो खस्यो खाल्डोमा उसैलाई थाहा हुन्छ गहिराई । समाजमा नाक र ईज्जत जोगाउन समेत ठूलो शान हो छोराछोरीलाई बाहिर पठाउनु ।
यही शानको पहाडमा उक्लिएर कोहीले राम्रो पनि गरेका छन् कोही भने बिगि्रएका छन् । यतिखेर शब्दहरुमा बिगि्रएको पक्ष उल्लेख गरिरहँदा म नेपाली चेलीलाई स्मरण गरिरहेको छु । उही नेपाली चेली सिगरेटको धुँवामा पश्चिमेली हावामा उडिरहेका छन् । अनि अंग्रेजी पहिरनमा छोट्टिरहेकी छन् । हो उनी हुन् उच्च अध्ययनका लागि बाहिर उडेकी । नेपाली गौरवको कथालाई कुल्चेर उतैकै हावामा बहकिएर उच्च अध्ययन सक्याएर नेपाल फर्किदा निकै कुरा सिध्याएर आउँछ । जुन हर्ष विभोर बनेर सगुन टक्राउँने परिवारलाई ज्ञात हुँदैन ।
पुराना कल्पेका सपनाहरु चुलिन्छ दृश्यहरु अघि खेल्छ । स्वदेशमा आफ्नो मान्छेलाई के दिँऊ खाली शून्य अनि मलेशिया बसाँईको रंगीन सपना बोकेर फर्किन्छ रित्तो हात । ऋणमा थपिएको व्याज घरमा बढेको समस्याले ऊ बैचैन बन्छ । त्यही पल नथाम्दाको क्षणले ऊ पोलिरहन्छ…जलिरहन्छ…अनि बोलिरहन्छ…छ्या कस्तो ‘कुकुर’ भएछु ।
नेपाली चेली विदेशी धरतीमा विदेशीसँग बेमाजामा हिड्ने गरेको पिएको र रमाएको खबर पक्कै राम्रो होईन । नेपाली चेलीमात्रै होईन नेपाली चेलालाई समेत त्यस्तै हावाले छुने गरेको छ । अनि अध्ययनलाई अँध्यारोमा राखेर अग्रपक्तिमा निस्किन्छ जसले गर्दा देशलाई चोट पर्छ । आखिर देशलाई सोच्ने पनि को छ र हुनपनि देशले के दिएको छ र जे होस् शब्दहरुको मनसाय यो होईन की अनेकनलाई आक्षेप लगाऊ सपि्रन गाह्ो हुन्छ तर विगि्रन क्षणभर । यो सुन्न त सबैले सुनेकै हो । तरपनि हामी क्षणिक मजाको लागि आफुले आफुलाई हरेक कुरामा बिगारिरहेका हुन्छौं । यहाँ सम्म बुझाउन नसकेको भए क्षमा चाहन्छु ।
अब शब्दको उडान मलेशियातिर । रमाईलो ठाउँ नयाँ परिवेश अनि चिरपरिचित बनेका सुन्दरीहरु । प्रत्येक दिन नयाँ अनुहारहरुको बढ्दो हिमचिम । देश बिर्सिएर परिवारका सम्झना कुल्चिएर फरक स्वादमा नयाँ साँझ र नयाँ बिहानको ताजगीले नेपालीहरुका अनुहार खुलेका छन् …मन चंगा बन्छ । श्रम लट्टाईजस्तै घुमिरहन्छ । उस्तै समयपनि । साँझको हरेक नशामा डोरी छुट्छ अनि श्रम र समयको रित्तोपनाले त्यो बेला गाँज्छ जब नजिकिन्छ स्वदेश फिर्ताको तारिख । घरतिरका पुराना दृश्यहरु मनभरि फैलिन्छ । पुराना जोवनका ‘बहादुरीहरु’ विदेशी सुन्दरीहरुमा पोखिएकोमा दुख मान्छन् । सरसर्ती गन्ती हुन्छ ।
लगभग सयौं गोरा अनुहार अनि स्पर्शमा उडेका ताता बाफहरु । ती त सबै गए मात्र बाँकी रित्तोपना । पुराना कल्पेका सपनाहरु चुलिन्छ दृश्यहरु अघि खेल्छ । स्वदेशमा आफ्नो मान्छेलाई के दिँऊ खाली शून्य अनि मलेशिया बसाँईको रंगीन सपना बोकेर फर्किन्छ रित्तो हात । ऋणमा थपिएको व्याज घरमा बढेको समस्याले ऊ बैचैन बन्छ । त्यही पल नथाम्दाको क्षणले ऊ पोलिरहन्छ…जलिरहन्छ…अनि बोलिरहन्छ…छ्या कस्तो ‘कुकुर’ भएछु ।
This entry was posted on फ्रेवुअरी 2, 2010 at 5:01 अपराह्न and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.